Minisitry ny fizahantany ao Jamaika: ezaka roa hanamora ny fanarenana haingana ny tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Minisitry ny fizahantany ao Jamaika: ezaka roa hanamora ny fanarenana haingana ny tany
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • fanorenana • Resorts • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia miantso ny mpandray anjara amin'ny fizahan-tany eran-tany sy isam-paritra mba hanao ezaka avo roa heny hanamorana ny famerenana haingana ny indostrian'ny fizahan-tany iraisam-pirenena ary amin'ny fanitarana ny toekarena manerantany.
Ny minisitra Bartlett dia nanambara ny antso tao amin'ny vaomieram-paritra UNWTO any Amerika izay natao tany Jamaika androany.
Ny tapakila iraisam-pirenena momba ny fizahantany tamin'ny taona 2020 dia nihena 64 isan-jato raha ny tena izy, mitovy amin'ny fihenan'ny US $ 900 miliara.
Ny fatiantoka tanteraka amin'ny vola azo tamin'ny fanondranana avy amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena dia nahatratra $ 1.1 tapitrisa tapitrisa dolara amerikana.
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Bartlett, dia nanao ny antso rehefa nitantana ny fampifangaroana ataon'ny Vaomieram-paritra misahana ny fizahan-tany 66 an'ny Firenena Mikambana (UNWTO) 24 an'ny amerikanina (CAM), anio (XNUMX jona).
Ny minisitry ny fizahan-tany ho an'i Arabia Saodita, ny Halehibeny Ahmed Al Khateeb, ary ny minisitry ny fizahan-tany sy ny fitaterana iraisam-pirenena ho an'i Barbados, ny loholona, ​​ny Hon. Lisa Cummins, dia iray amin'ireo mpitarika fizahan-tany manerantany izay tonga tany Jamaika hanatrika ny fivorian'ny CAM. Ny senatera Cummins koa no mitarika ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO). Ireo tompon'andraikitra misahana ny fizahan-tany dia nandray anjara tamin'ny diniky ny Minisitra momba ny famelomana indray ny sehatry ny fizahantany ho an'ny fitomboana.
Fizahan-tany any Jamaika Nasongadin'ny minisitra Bartlett fa "ny tapakilan'ny fizahan-tany iraisam-pirenena tamin'ny taona 2020 dia nihena 64 isan-jato raha ny tena izy, mitovy amin'ny rano mitentina US $ 900 miliara, raha 1.1 tapitrisa tapitrisa dolara amerikana kosa ny fatiantoka totalin'ny vola azo tamin'ny fanondranana avy amin'ny fizahantany iraisam-pirenena.
Nanampy izy fa "ny fiatraikan'ny COVID-19 teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany any Jamaika any Amerika dia nahitana fihenan'ny 68 isan-jato ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena tamin'ny taona 2020, nahitana 70 tapitrisa nidina tamin'ny 219 tapitrisa voarakitra tamin'ny taona 2019." Nitaraina izy fa araka ny tatitra fahasivy momba ny fameperana ny dia, toerana 10 any Amerika, na 20 isan-jaton'ny toerana rehetra any amin'ny faritra, no nanidy tanteraka ny sisin-tanin'izy ireo hatramin'ny 1 Febroary 2021, miaraka amin'ny fironana midina amin'ny fifamoivoizana.
Raha nanantena fironana tsara kokoa handroso ny minisitry ny fizahan-tany any Jamaika Andriamatoa Bartlett dia nanamafy fa "ny antso ankehitriny dia ny fampitomboana ny ezaka ataontsika hiara-miasa amin'ny fomba azo ampiharina sy misy dikany mba hiverenana amin'ny andro fahombiazan'ny dia sy fizahan-tany." Hoy izy: "Manantena aho fa ny vokatra iray amin'ity fivoriana ity, ao anatin'izany ny Dialogue Ministerial, dia tsy ny famerimberenana fotsiny ny fahavononantsika sy ny finiavana politika fa farafaharatsiny dingana iray mivaingana azon'ny faritra iaraha-miaina hamelomana indray ny fizahantany."
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Andriamatoa Zurab Pololikashvili, tamin'ny fanamafisana ny filana hanafainganana ny famerenana ny sehatry ny fizahantany dia nilaza fa “tsy azontsika atao ny mamela olona ao aorian'ity dingana ity… Zava-dehibe ny fotoana, fianakaviana maro indrindra any Karaiba no tsy manana fomba iray hafa hialana amin'ity. Io no loharanom-bola lehibe ho azy ireo ary olona sy ankizy ary fianakaviana maro no miankina amin'io vola miditra io. ”
Ny minisitra Al Khateeb dia nanasongadina ny filàna fiaraha-miasa bebe kokoa amin'ny ady amin'ny areti-mandringana COVID-19. "Ity dia olana manerantany, ary ny vahaolana dia tokony ho avy amin'ny olona rehetra ary noho izany dia mila miara-miasa isika ary mila miara-miasa," hoy izy nanambara. Niantso ihany koa izy mba hisian'ny protokol mazava sy mirindra hanamorana ny fitomboan'ny sehatry ny fizahantany.